Vaovao - inona ny tariby elektrika?
Electro Galvanization dia dingana iray izay misy sosona manify ny zinc mifatotra amin'ny herinaratra sy simika amin'ny tariby vy mba hanomezana azy.
Mandritra ny dingan'ny Electro Galvanization dia taroboka anaty fandroana masira ny tariby vy. Zinc dia miasa ny anode ary ny Steel Wire dia miasa toy ny cathode ary ny herinaratra dia ampiasaina hamindrana elektronika avy amin'ny anode mankany code. Ary ny tariby dia mahazo sosona zinc manify izay manangana sosona fisorohana.
Rehefa vita ny fizotrany dia milamina, tsy mitete ary mamirapiratra ny firakotra vita - mahatonga azy io ho tsara ho an'ny rindranasa maritrano na fampiharana hafa izay misy lanja ny toetra mampiavaka azy. Na izany aza, raha vao miharihary amin'ireo singa izy, dia mety hiharatsy ao anatin'ny fotoana fohy ny famaranana.
Ny electro-galvanized dia fomba iray anaovana galvanizing. Izy io dia antsoina hoe galvanizing mangatsiaka amin'ny indostria. Ny sosona zinc elektronika vita amin'ny alimina ao anaty mikrô 3 ka hatramin'ny 5, ny fepetra takiana manokana dia mety hahatratra 7 hatramin'ny 8 microns ihany koa. Raha ampitahaina amin'ny metaly hafa. Zinc dia metaly mora vidy sy mora vidy ihany. Izy io dia fonosana fanoherana anti-harafesina ambany sanda. Ampiasaina betsaka izy io mba hiarovana ny faritra vy, indrindra hisorohana ny harafesin'ny atmosfera ary ampiasaina amin'ny haingon-trano.
Ny tombony azo avy amin'ny tariby elektrika
• Mahomby amin'ny vidiny raha oharina amin'ny Hot Dipped GI
• Famaranana ambonimbony
• Famonoana zinc fanamiana
Na izany aza, misy ny fatiantoka sasany amin'ny Electro Galvanized Wire
• Faharetan'ny fiainana fohy raha oharina amin'ny Hot Dipped GI
• Hihosotra haingana kokoa noho ny vokatra mitovy izay nopetahany diloilo mafana
• Fepetra ho an'ny hatevin'ny zinc